All news | Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan | Page 4
Dilal ka dhacay magaalada Cadan ee koonfurta wadanka Yaman.
Saacadihii lasoo dhaafayay dilal ayaa ka dhacay magaalada Cadan oo ah xarunta kumeel gaarka ee dowladda Cabdi-rabbi uu hogaamiyo, waxaana dilalkaas loo geystay shakhsiyaad kala duwan. Koox hubeysan ayaa rasaas ku furtay mas’uul katirsan xisbiga Al-Islaax oo kamid ah axsaabta siyaasadeed ee ka jirta wadanka Yaman. Saadaq Axmed ayaa isagoo ku sugan degmada Al-qaluuca ee gobolka Cadan waxaa toogtay koox ...	Read More »
Barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaa caawa lagu soo qaatay qodobo kala duwan ee kala deg linkiga hoose. Halkan Ka Dhageyso Dhuuxa Wareysiyada 17 07 2018	Read More »
qeybta hoose ka dhageyso warka duhurnimo oo lagu soo qaatay qodobo kala duwan. Halkan kala deg warka Duhurnimo 17 07 2018	Read More »
Dowladda Maraykanka iyo dowladaha ku garab taagan howlgalka dhanka duqeymaha ah ee ka socoda wadamada Ciraaq iyo Suuriya ayaa ku kacay xasuuq arxan daro ah oo loo geystay dad muslimiin aan waxba galabsan. Diyaaradaha Maraykanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxay duqeymo ka geysanayeen deegaanno hoos yimaada magaalada Al-buukamaal ee gobolka Deyru-Zuur ee wadanka Suuriya. Deegaannada Baaquuz-fowqaani iyo As-suusa oo hoosyimaada ...	Read More »
Kadib howlgalkii ballaarnaa ee maalintii Sabtida dagaalyahanno katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku qaadeen goobo muhiim ah oo ku yaala nawaaxiga madaxtooyada iyo baro kontrool oo ay ku suganyihiin ciidamada dowladda ayaa waxaa sii kordhaya khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay. Ugug yaraan 25 ruux oo u badan ciidamada ilaalada madaxtooyada iyo shaqaalaha dowladda ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday ...	Read More »
Habeenkii xalay waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay howlgallo kala duwan oo ay fuliyeen ciidamo katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ee sida firfircoon uga howlgala caasimadda. Ciidamo katirsan Mujaahidiinta oo hubeysnaa ayaa weeraray saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo katirsan dowladda oo ku yaala degmada Dharkenlay. Askarta Mujaahidiinta waxaa u suuragashey iney la wareegaan saldhiga Sifeynta batroolka ee degmada Dharkenlay halkaas oo ay ...	Read More »
qeybta hoose waxaad kala degi kartaa warka subaxnimo ee idaacada islaamiga ah alfurqaan. Halkan Ka Dhageyso Warka Subaxnimo 17 07 2018	Read More »
Madaxweynayaasha Maraykanka iyo Ruushka oo kulan yeeshey, iskuna raacay ka hortaga waxay ugu yeereen “Argagaxisada”.
Magaalada Helsinki ee caasimadda wadanka Finland waxaa ka dhacay kulan saacado qaatay oo dhexmaray madaxweynayaasha wadamada Maraykanka iyo Ruushka Faladamir Butin iyo Donald Trump. Kulanka labada madaxweyne ayaa qaatay 4 saacadood oo xiriir ah, waxayna ka wada hadleen arimo badan iyo masaalix wadajir ah oo ay leeyihiin labada dowladood. Madaxweynaha Ruushka Faladamir Butin ayaa si cad u sheegay inuu aad ...	Read More »
Barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaa caawa lagu soo qaatay qodobo kala duwan ee kala deg linkiga hoose Halkan Ka Dhageyso Dhuuxa Wareysiyada 16 07 2018	Read More »
halkaan Ka Dhageyso Warka duhurnimo.
warka duhurnimo waxa uu kamid yahay saddexda war ee ka baxa idaacada alfurqaan,waxaana maanta lagu soo qaatay qodobo kala duwan ee kala deg linkiga hoose. Halkaan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo 16 07 2018.lite	Read More »